Rehefa Voafidy Indray Izy, Tsy Nasian’ny Filohan’i Iràna Vidiny Ny Fampanantenany Hanafaka Ireo Mpitarika Ny Hetsika Maitso · Global Voices teny Malagasy
Rehefa Voafidy Indray Izy, Tsy Nasian'ny Filohan'i Iràna Vidiny Ny Fampanantenany Hanafaka Ireo Mpitarika Ny Hetsika Maitso
Voadika ny 06 Jona 2017 5:10 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Français, русский, English
Mir Hussein Moussavi (ankavanana) no lasa “lehiben'ny” Hetsika Maitso rehefa novainy ny lokon'ny fampielezankeviny mba hifanaraka amin'ny an'ireo fihetsiketsehana nanoheran'ireo olona an-tapitrisa ny heverin'izy ireo ho fifidianana feno hosoka. Moussavi, Zahra Rahnavard vadiny (afovoany), ary i Mehdi Karroubi (ankavia), kandidà iray hafa mpandàla fanavaozana, nosamborina fa hoe “nihantsy fikomiana”
Tao amin'ny tranonkalan'ny Ivontoerana Momba ny Zon'Olombelona ao Iràna ity lahatsoratra ity no nivoaka voalohany.
Nandritry ny kaonferansa voalohany nataony ho an'ny mpanao gazety tamin'ny 22 May, andro vitsy monja taorian'ny nanambaràna azy ho mpandresy tamin'ny fifidianana tao Iràna, nolavin'ny Filoha Hassan Rohani ny hampitsahatra ny fametrahana ho aminà toerana arahina maso sy tsy nandalo fitsaràna natao an'ireo telo mpitarika ny mpanohitra —fampanantenana nataony nandritra ny fampielezankeviny voalohany tamin'ny fifidianana ho filohampirenena.
Raha nanontaniana momba izay ho ataony ho famotsorana ireo mpitarika ny fanoherana Mehdi Karroubi, Mir Hosseini Mousavi sy Zahra Rahnavard, amin'ny tsy famelàna azy ireo hivoaka ny toeram-ponenany nandritry ny enina taona noho izy ireo nitarika fihetsiketseham-bahoaka am-pilaminana nanoherana ireo vokatra notoherina be tamin'ilay fifidianana ho filohampirenena natao tamin'ny 2009, nanaovan'i Rohani sarinteny ny hoe miankina amin'ny fiarahamiasan'ireo rantsana sasany ao amin'ny fanjakàna no hisian'ny vahaolana.
“Misy lalàna mifehy ny firenentsika ary tsy maintsy manaraka izany isika rehetra”, hoy izy tamin'ny 22 May. “Samy manana ny andraikiny ny fahefana mpanatanteraka, ny mpanao lalàna ary ny fitsaràna. Ny lalàm-panorenana no fototra irosoantsika”
“Tomponandraikitra amin'ny zon'ny olompirenena tsirairay aho, eny fa na ireo Iraniàna miaina any ivelan'ny sisintanintsika aza”, hoy i Rohani nanampy. “Na aiza na aiza ahitako fanitsakitsahana ny zon'ny Iraniàna, hihetsika aho araka ny fahefàna eo am-pelantanako. Amin'ireo tranga izay andraikitry ny fitsaràna, dia hamaly amin'ny alàlan'ny fampitàna mivantana aho na anatinà fihaonana fiaraha-midinika. Fikasàn'ny governemanta ho avy eo ny hampihatra ny Satan'ny Zon'ny Olompirenena. Momba io indrindra, mavesadanja amiko ny zon'ny tsirairay”.
Tsy nanisy resaka momba ilay Mpitarika Faratampony Ali Khameini mihitsy i Rohani, izay ny fanoherany tsy hay hatao na inona na inona amin'ny fanalalahana ireo telo mpanohitra no mitàna ireto farany ao anatin'ny faribolan'ny tsy fanànana zo.
Tao amin'ny famoriambahoaka nandritra ny fampielezankeviny ho an'ny fifidianana izay ho filohampirenena, tao amin'ny anjerimanontolon'i Sharif ao Téhéran , ny 13 May 2013, nanambara ny fanantenany hamotsotra ireo telo ireo ao anatin'ny taona telo voalohany hitondràny i Rohani : “Afaka atsangantsika ato anatin'ny taona ho avy ireo fepetra ilaina mba hanafahana ireo olona naiditra am-ponja na noferana tsy hivoaka ny toerana misy azy noho ireo fihetsiketsehana tamin'ny 2009”.
Ireo tenifaneva ho famotsorana an'i Moussavi sy Karroubi no baikom-pitoloman'ireo mpanohana an'i Rohani nandritra ny fampielezankevitra tamin'ny fifidianana sy ireo fankalazàna ny fandresena azony.
Ireo [tenifaneva] ho fanohanana an'i Rohani sy Moussavi, famoriambahoaka sy diabe tsy mitsahatra miakatra avy ao ValiAsr mankany avaratra.
Manoloana ny toa fahanginan'i Rohani momba ilay olana nandritra ny fepotoam-piasàny voalohany, imbetsaka ireo politisiana sasany no niteny momba azy io, ary na ilay filoha lefitra fatra-pifikitra amin'ny nentindrazana ao amin'ny parlemanta aza, Ali Motahari, izay namerimberina matetika ny filàna vahaolana.
Tanaty tafa iray tamin'ny 8 May 2017, namerina ny sosokeviny hamahàna ilay olana amin'ny alàlan'ny fifanarahana i Motahari .
“Nisy dingana vitsy vita mankany amin'ny famahàna ireo fitazonana aminà toerana tsy hahazo hivoaka ny trano, ary tsy maintsy henointsika ireo tohankevitra avy amin'ny ankilany mpifanandrina”, hoy izy. “Tsy maintsy miroso mankamin'ny fanatsarana ny toedraharaha eto amin'ny firenena isika, ary manakana ireo olana tsy hivadika ho krizy”.
Efa nohazavain'i Motahari tany aloha tany fa i Khamenei no singa fehizoro amin'ny fanohizana ilay fitazonana tsy hivoaka ny trano.
“Iray amin'ireo vato misakana ny famotsorana an-dry zareo sy fisisihan'ny sasany amin'ireo tomponandraikitra hoe ny tsy fisian'ny fialantsiny sy fifonana avy amin'izy ireo dia manohintohina ny fanjakàna sy ny Mpitarika Faratampony”, hoy i M. Motahari. “momba ireo zavanitranga tamin'ny 2009, tsy hadisoana ny fanànana fomba fijery hafa tsy mitovy amin'ny an'ireo olona eo amin'ny fitondràna…ny fanohizana mitàna [an'i Moussavi, Rahnavard sy Karroubi] tsy hivoaka ny tranony nandritry ny enina taona dia tsy mifanaraka, na amin'ny lalàna, na amin'ny fampianaran'ny finoana”.
Tao anatin'ilay resaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny 22 May, nanontaniana an'ilay filoha vao avy voafidy indray ny momba ireo fepetra ho apetrany [amin'ny hoavy] hiarovana ny zon'ireo mpanakanto, indrindra fa any amin'ny sehatry ny mozika sy sarimihetsika.
“Iray amin'ireo vokatry ny fifidianana tamin'ity taona ity ny hoe ny olona rehetra dia nihavana tamin'ny mozika”, hoy ny navalin'i Rohani. “Na izany aza, tsy dia ankafizintsika loatra ireo mozika ratsy kalitao. Lazain'ny sasany ho tsara ihany koa izany, nefa na izany na tsy izany, azoko antoka fa ny governemanta vaovaontsika eo dia hanohana bebe kokoa ny vondrom-piarahamonina ara-kolontsaina”.
“Tena nihatsara mihitsy tokoa ny toedrahraha ho an'ny mozika nandritra ireo efatra taona teo aloha, saingy ho ampitombointsika ny ezaka mandritra ireo taona efatra hoavy”, hoy izy nanampy.
Hatramin'ny 2013, rehefa lany indray i Rohani noho ny fampanantenany hisian'ny fiarahamonina misokatra kokoa, marobe ireo mpiangaly mozika nosazian'ny fanjakana, isan'ireny ireo artista malaza Alireza Ghorbani sy Sirvan Khosravi, izay nofoanana tamin'ny fotoana farany ny fampisehoana tokony nataony.
Ireo mpitondra fivavahana fatra-pifikitra amin'ny nentindrazana dia nanamarina ny famelezany ireo mpiangaly mozika tamin'ny alàlan'ny andianà fanambaràna sy didim-pitondran'ireo mpitarika fivavahana ambony toerana. Etsy andaniny , Khamenei dia matetika no mampitandrina manoloana ireo loza lazaina fa ateraky ny mozika, izay lazainy fa “mamily hiala amin'ny làlana nosoritan'Andriamanitra”.
Nambaran'i Rohani ihany koa fa ny governemantany dia hametraka toromarika mifototra amin'ireo torolàlana ho an'ny fanabeazana —izay tsy mifanohitra amin'ny fotokevitra silamo —voarakitra anatin'ny Diary 2030 an'ny Firenena Mikambana—izay notoherin'ireo mpifikitra amin'ny nentindrazana tamin'ny heriny manontolo.
“Ireo minisitry ny raharaha ivelany, ny siansa ary ny fanabeazana, dia nanoratra ho any amin'ilay mpitarika faratampony, nanazava tamin'ny antsipirihany tamin'ilay Mpitondra Hajaina fa ny Repoblika Islamika dia mitazona ny zo tsy hiraharaha ireo singa ao anatin'ilay Diary 2030 ka mety tsy hifanaraka amin'ny kolontsaintsika sy ny soatoavin'ny firenentsika”, hoy i Rohani.
Momba ny toeran'ny vehivavy any am-piasàna, nolazain'i Rohani fa hanao misimisy kokoa ny governemantany mba hampitomboana ny fanomezana asa ny vehivavy.
“Hadisoana ny fiheverana hoe manana sata ambony ny lehilahy na hoe mahavita kokoa ry zareo raha miohatra amin'ny vehivavy”, hoy izy.
Mandritra izany, namerina ireo hevitra mpanavakavaka avy amin'i Khamenei i Rohani tamin'ny fanamafisana fa ny asa sasantsasany dia mety kokoa ho an'ny lehilahy fa tsy ny vehivavy : “Mazava ho azy fa mendrika ny lehilahy amin'ny asa sasantsasany, toy ny vehivavy anatin'ny asa hafa. Samy nomen (Andramanitra) fahaizamanao manokana ho azy avy ny tsirairay”.
“Saingy tsy ambany noho ny lehilahy ny vehivavy ary tsy misy dikany ny fitazonana azy ireny tsy hivoaka ny trano raha raisina amin'ny fijery sosialy sy araka ny lalàna”, hoy izy nanampy.